Maraykanka, 06 July 2016
Arbaco 6 July 2016
FBI-da "Kuma Talineyso in Dacwado Lagu soo Oogo Clinton"
Agaasimaha hay’addaa dambi baarista Mareykanka ee FBI-da James Comey ayaa sheegay inaysan ku talineyn in dacwado lagu soo oogo Hillary Clinton.
Jeddah: Qarax ka Dhacay Meel u Dhow Qunsuliyadda USA
Wasaaradda Arrimaha gudaha Sacuudiga ayaa sheegtay maanta in nin isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey meel u dhow qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada galbeedka dalkaas ku taalla ee Jeddah.
Qaxootiga Syria ee USA Imanaya Oo Kordhay
Tirada qaxootiga Suuriyaanka ah ee Marykanka soo galay bishii June, ayaa ku laba jibbaarantay tirada bilihii hore ee la soo dhaafay ee dib u dejinta loogu sameeyay dalkan Mareykanka.
Warbixinta Aqalka Cad ee Drones-ka
Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sii daayay warbixin muddo dheer laga sugayay oo ku saabsan dadkii rayidka ahaa ee lagu dilay weerarada meelaha furimaha ka baxsan ay ka fuliyeen dayuuradaha aaney cidina wadin ee Droneka ee Mareykanka.
Mareykanka oo Soomaaliya Ugu Hambalyeeyey 1-da July
Dowladda Mareykanka, ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooduba ugu hambalyeysay 56 sana guuradii ka soo wareegatay markii Soomaaliya ay xurnimada qaadatay, kowdii July ee 1960-kii.